[တရားဝင်] dr.fone Toolkit ကို - က Android Data Recovery 2017 သည်အကောင်းဆုံး
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - အန်းဒရွိုက်မှာ Data Recovery ကို
Android စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet များအတွက်ကမ္ဘာ့ 1st ဒေတာဆယ်တင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲ။
ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, အဆက်အသွယ်များ, မက်ဆေ့ခ်ျပို့, ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများနှင့်ပိုပြီး Recover ။
မှတ်ချက်: သင်၏ Windows / Mac OS ကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုပါ။
ဆုံးရှုံးသွားသောဒေတာကိုဆုံးရှုံးသည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့အများကြီးဘုံအခြေအနေတွေကနေ Android ပေါ်မှာပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကို recover လို့ရပါတယ်။
Rooting သို့မဟုတ် ROM ကိုတောက်ပပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးဒေတာများ
သငျသညျကို Android ပေါ်မှာသင့်ပျောက်ဒေတာဆယ်ယူသို့မဟုတ်မရနိုင်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. မျှစိတ်ကူးရှိပါကသင်ပထမဦးဆုံးက scan ဖို့အခမဲ့အစမ်းဗားရှင်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးနောက်သင်ရှာတွေ့သည့်ဒေတာ preview နိုင်ပါတယ်။ ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
သင်က Android device ကိုပေါ်ရှိသင့်ပျောက် data တွေကိုတွေ့ပါပြီးတာနဲ့သင်ချင်တယ်ဆိုကို item ကို select နှင့်တစ်ကလစ်နှင့်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
သငျသညျထောကျပံ့ပစ္စည်းတွေများ၏စာရင်းကိုနေဆဲလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်စသည်တို့က Samsung, HTC, LG, Sony, Motorola, ZET, Huawei ကနေ 6000 ကျော် Android ဖုန်းများနှင့် tablet ပေါ်မှာ data တွေကို recover လုပ်ဖို့ဤ Android ဒေတာဆယ်တင်ရေး app ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဤ Android ဒေတာဆယ်တင်ရေးကိရိယာတခုအမြစ်တွယ်ခြင်းနှင့် unrooted နှစ်ဦးစလုံးသည် Android device များအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအပေါ်ဘာမှပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါအမြစ်တွယ် device ကိုနေတုန်းပဲအမြစ်တွယ်ပါလိမ့်မည်, နှင့် unrooted တဦးတည်းလည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
အန်းဒရွိုက်ပေါ်တွင် SD ကဒ်သကဲ့သို့, သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်တယ်, သို့မဟုတ်တစ်ကဒ်စာဖတ်သူကိုအတူကချိတ်ဆက်ပါ။ အလုပ်နှစ်ဦးစလုံး။
ဤ Android ဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကိုသာသင့်ရဲ့ Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုဒေတာဖတ်တယ်။ ဒါဟာဘာမှပြုပြင်မွမ်းမံစောင့်ရှောက်သို့မဟုတ်အခြားသူများမှသင့်ရဲ့ device ပေါ်မှာဘာမှပေါက်ကြားမည်မဟုတ်။
အန်းဒရွိုက်ဒေတာဆယ်တင်ရေးတော်တော်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရာအသံ။ တကယ်ဆိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲပေမယ့်လူတွေကအလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ , စကင်ဖတ်စစ်ဆေး preview ကိုနှင့်ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သငျသညျလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည်ဤသုံးပါးကလေးခြေလှမ်းများဖြစ်ပါသည်။
ဤ Android ဒေတာဆယ်တင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးအသုံးပြုသူများသည်အနာဂတ်အတွက်အခမဲ့အဆင့်မြှင့်ခံစားနိုင်။ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။
6.0 Android နဲ့ဟောင်းတဦး
Android ထုတ်ကုန်ကနေပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြန်လည်ဖို့ scan
ဒေတာ recover ဖို့က Android device ကိုပေါ်တွင်သင်၏မှတ်ဉာဏ်ကဒ် scan
အသက် 30 နေ့ရက်များသည်အခမဲ့ဒါဟာစမ်းကြည့်ပါ!
အားလုံးဒေတာ, ဒါမှမဟုတ်ရွေးချယ်ထားသည့်ဖိုင်များကို Recover
3 ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများ: ချိတ်ဆက် scan နဲ့ Android ပေါ်မှာ recover
" dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာက Windows PC များများအတွက် desktop ပေါ်က App ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံက install လုပ်, ပြီးရင် program ကိုဖွင့်လိုက်ပါနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာရန်သင့် device ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ ထိုအရပ်မှ, သငျသညျငွိမျဝနှင့်အတူပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံများ, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ, ဗီဒီယိုများ, အဆက်အသွယ်များနှင့်ပိုပြီးရှာဖွေနိုင်သည်။ >> ထပ်မံလေ့လာရန်
- Softonic, တစ်နေ့လျှင် 100 ကျော်လူဦးရေသန်းနှင့်အတူဦးဆောင်ဆော့ဖ်ဝဲကို download စာမျက်နှာကိုမှသည်
" Android အတွက် dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာကျွမ်းကျင်မှုအားလုံးအဆင့်ဆင့်၏အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အညွှန်းဖြစ်နိုင်သည်ကို interface ကိုသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသောရှိပါတယ်။ ဒါဟာပေါ့ပါးသည်နှင့်စနစ်အားအရင်းအမြစ်များကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကိုမသုံးထားဘူး။ ယေဘုယျအား, ဒီမဟုတ်ဘဲအသုံးဝင်သော tool ကို kit ထဲကသင်ရရှိနိုင် ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ Android device ကိုများအတွက်ဒေတာဆယ်တင်ရေးမှကြွလာသောအခါအနည်းငယ်စေးကပ်အခွအေနေ။ ထက်ပိုသော Learn >>
Android ဖုန်းများအတွက်ထံမှအားဖျက်သိမ်းပြီးစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ Recover လုပ်နည်း